Fandinihana Momba Ny Herintaonan’ny Fanjavonan’ireo Mpianatra Tao Ayotzinapa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Septambra 2015 8:39 GMT
Nandefa hafatra tao amin'ny Youtube andro vitsivitsy talohan'ny tsingerintaonan'ny fanjavonan'ireo mpianatra tao Ayotzinapa i Omar Garcia, izay antsoina koa hoe “faha-44″ noho izy tafavoaka velona tamin'ny loza ny alin'ny 26 Septambra 2014, raha nanjavona (ary voalaza fa novonoina) ireo mpianatra avy ao amin'ny Kolejy Ambanivohitra Raul Isidro Burgos ao Ayotzinapa. Tao anatin'ny lahatsariny, nilaza lahatsoratra vao haingana nalefan'ny Vondrona Manampahaizana avy amin'ny taranja maro izay nandà ny fanazavana ofisialy momba ny zava-nitranga io alina io izy ary nitady ny fanohanan'ny vahoaka mba tsy hohadinoina ireo olon-kafa an'arivony nanjavona.
Araka ny voalazan'i Omar, mikarakara hetsika iraisampirenena ireo mpikatroka, izay mitovy ny tamin'ny 15 Novambra 2015, raha nivondrona ny olona an'arivony ny amin'izay “mety ho hetsika ara-politika goavana indrindra eo amin'ny tantaran'i Meksika.” Anisan'ireo hetsika hafa karakaraina amin'ny 26 Septambra ny diabem-pirenena, diabe kasaina hiainga avy ao Los Pinos (trano fonenana ofisialin'ny Filoha) mankao Zocalo (kianja lehibe) ao an-drenivohitra. Mihetsiketsika ny olom-pirenena marobe mba handray anjara amin'ny hetsika manerana ny firenena.
Ahitana hetsika ara-kolontsaina ihany koa ny fahatsiarovana ny zava-nitranga, toy ny sary mampiseho ny tantaran'ireo mpampianatra tsy hita, izay mitondra ny lohateny hoe “365 por los 43. Hasta las paredes saben” (“365 ho an'ny 43. Mandra-pahafantaran'ny rindrina”), notontosaina nanomboka tamin'ny 19 Septambra ka hatramin'ny 17 Oktobra ao amin'ny Casa do do hijo Ahuizote, ao amin'ny renivohi-pirenena. Omen'ireo mpakasary alalana hampiasa ny sary ny vahoaka mba hozarain'izy ireo eny an-dalana ary avoaka eny amin'ny rindrina ho toy ny endrika fanehoan-kevi-bahoaka. Napetraka ihany koa ny karazana sarety mba hizarana ny sary nandritra ny diabe 26 Septambra tao Mexico City.
Eo ampandinihana ny dikan'i Ayotzinapa, nosoratan'ilay mpanao gazety sady mpanoratra Federico Mastrogiovanni, ampiarahany amin'ny fampiratiana an-tsary, ireto songa tamin'ny lahatsoratra :